Tun Tun's Photo Diary: December 2016
Kalaw Day 1 (Visit to School & Market)
2013-Dec-18, နှီးဘုရား နဲ. ရွေဥမင် ဘုရား ဖူးတော့ ကလောမြို.ထဲက ပြန်လာခဲ့တယ်၊ လမ်းမှာ မူလတန်းကျောင်း တွေ.လို. ကျောင်းမတက်ခင်ကလေးတွေ ဆော့နေတာ တွေ.လို. ခဏ၀င်ကြည့်ခဲ့တယ်။ ကျောင်းက တောင်ကုန်းပေါ်မှာ ရှိတာပါ။ ကလေးတွေက ကင်မရာတွေ.တော့ သဘောကျနေကြတယ်။ အဲ့တုန်းက ကျွန်တော် ကင်မရာ ၂လုံးပါသွားတယ်။ အသေးတလုံး နဲ. အကြီးတလုံး။ သူတို.ကို အသေးတလုံး ပေးဆော့ ခိုင်းပြီး ကျန်တဲ့ ကင်မရာအကြီး နဲ. သူတို.ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ကလေးတွေက ကင်မရာ ကိုဆော့ပြီးတော့ ရိုရိုသေသေ ပြန်ပေးပါတယ်။
at 12/19/2016 10:11:00 PM Links to this post No comments:
Labels: Food, Kalaw, Myanmar, Myanmar Food
Kalaw Day 1 (Nee Paya & Shwe Oo Min Pagoda)
2013-Dec-18, မန္တလေးကနေ ည ၁၀နာရီကားနဲ. ကလောမြို. ကိုသွားတယ်။ ကလောမြို.ကို မနက် ၃ နာရီလောက် ရောက်တယ်ထင်တယ်။ ဘက်စ်ကား ပေါ်မှာ အိပ်လို.ကောင်းနေတုန်း၊ ကလော ရောက်ပြီဆိုလို. ကမန်းကတန်းဆင်းလိုက်ရတာ ကားပေါ်မှာ ခြုံထည်ပုဝါ ကျန်ခဲ့တာ မှတ်မိသေးတယ်။ အဲဒီ ဘက်စ်ကားက တောင်ကြီးထိသွားတာပါ။ ပေးထားတဲ့ ကားခနဲ. တောင်ကြီးထိ စီးလို.ရပါတယ်။ ကလောမှာ ဆင်းလို. ဈေးမလျှော.ပါဘူး။
at 12/03/2016 06:34:00 PM Links to this post 1 comment:
Labels: Kalaw, Myanmar